literature | Bo ဘိုဘိုလန်းစင်
အေးစက်ဝင်းလက်သည့် ဗာဂျင်းနီးယားနွေဦးတွင် ကျနော် မြို့ကလေး ကို ရောက်ခဲ့သည်။ ဇာတိ နေပြည်တော်ဟောင်းက မိတ်ဆွေက နီးနားဝန်းကျင်က အမေရိကန်မွေနှစ်တို့ကို လိုက်ပြသည်။ အိမ့်ရှင်မှာ မူလကပင် သမိုင်းဗေဒလိုက်စားသူဖြစ်၍ အမေရိကန်ခေတ်ဦးက သမ္မတဟောင်းတို့ အမွေသရီရတို့ ကြွယ်ဝရာ ဤနယ်မြေနှင့် အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်နေသည်။ ကမ္ဘာသစ်က ဥရောပလက်နက်နိုင်ငံတို့ လက်အောက်ခံ တိုင်းပြည်များ လွတ်လပ်ရေးယူပီး ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းလမ်းကို နင်းခဲ့ကြရာတွင် အဘယ့်ကြောင့် အမေရိကန်တို့က အဦးဆုံးနှင့် အအောင်မြင်ဆုံး ဖြစ်ရသနည်းဆိုသည့် အမေးက ခေါင်းထဲပေါ်လာချိန်တွင် အမေရိက ထူထောင်စသမိုင်းကို လျှပ်တပြက် ပြန်ကြည့်ခွင့် ရခဲ့သည်ဟု ဆိုရပါမည်။
Filed under: history, literature, opinion, politics	| LeaveaComment
Return of Bo Bo Aung
Illustrations from an adapted story of American writer O. Henry’s “Elsie in New York” inaBurmese fiction magazine called ‘Shumawa’ in 1955 as ‘A country girl met Bo Bo Aung’. The prolific Burmese romance writer, Tint-dae (1917-1980), adapted more than 100 stories of O. Henry in post-war Burmese press. “Bo Bo Aung” isa[…]
Milestones in the Mirror
သတင်းစာ နာရေးကြော်ငြာ အင်တာနက်မှာ ပါလာတော့ ထင်ရှားသူ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆုံးတယ်ဆိုတာ တန်းသိလာကြရပီ။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း ခယ်မဆုံးတော့ လူမသိတဲ့ အတွင်းရေးတွေ အများကြီး ပါသွားတာပေါ့။ ဦးသက်ထွန်းနဲ့ အေဒါ တရက်ထဲ တဆေးရုံထဲ ဆုံးတော့ ၁၉၅ဝ ကျော် အင်္ဂလိပ် စာရေးဆရာမ တယောက် ဝတ္ထုရေးဘို့ ရန်ကုန် လာတော့ ဂါးဒီးယန်း တိုက်မှာ ပညာတတ် အင်္ဂလိပ် စာရေးဆရာ အုပ်စု ဧည့်ခံပွဲ သတိရတယ်။ လန်ဒန် စိန်ပေါ ဘုရားကျောင်းမှာ ဦးသက်ထွန်း၊ တိုက်စိုးနဲ့ ရူပဗေဒ ပညာရှင် ဦးလှညွန့်တို့ ဂျာမန် ကျောင်းသူ တွေနဲ့ အပေါ်ထပ်က အသံကြားတဲ့ နံရံတွေ တက်ကြည့်တယ် ဆိုတာ အဲဒိဘက် ရောက်ရင် သတိရ နေမှာပဲ။ […]
Filed under: history, literature, obituary	| LeaveaComment